QODOBO FAA'IIDO LEH OO TOON AH IYO XAKAMEYN - DAAWADA DADWEYNAHA
The guryaha bogsiinaya of toon, ka badan dhirta bahalka bahalka yar
Inta badan annaga waa oofin karno sida dhir udgoon. Si kastaba ha noqotee, dad yar ayaa ka ogaanaya sifooyinka daawooyinka ee bahalka, taas oo ah burooyinka la qalajiyey ee geedka dhirta, oo u eg qaabab yar oo carnado leh caps.
Waxaa soo baxday in dawada dalal badani ay muddo dheer ka horba aqbaleen isticmaalka toon for ujeedooyin daaweyn. Sidaa darteed, Maraykanka iyo Yurub, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo dadka qaba dhibaatooyinka dheefshiidka.
Hindiya, bukaanjiif ayaa loo qoraa si loo yareeyo xanuunka xannuunka leh. Saliidda Clove ayaa loo isticmaalay dhakhtarka ilkaha, qalliinka iyo haweenka. Bisada waxaa sidoo kale loo isticmaalaa karinta iyo kiknoolajiyada.
Ma taqaanaa? Iyadoo ay ku saleysneyd xumbo ayaa soo saarey ilaa 60 daroogo.
Sida aad arki karto, xumbo ayaa caan ku ah dunida oo dhan sababtoo ah saameyntooda bogsiin, iyo noocyada kala duwan ee hantida faa'iido leh ee warshadani waxay sabab u tahay ka kooban kiimikada hodanka ah.
Waxyaabaha kiimikada iyo qiimaha nafaqada ee xiirida
Qayb ka mid ah kiimikaadkeeda, dhukay dhir udgooni ma siman yihiin. Waxaa ku jira:
saliid asaasiga ah (20%);
walxaha macdanta: sodium, kalsiyum, magnesium, birta, fosfooraska, zinc, copper, selenium;
fitamiinada A, B1, B2, PP, C;
Qiimaha nafaqada ee xiirto sidoo kale waa mid aad u sarreeya, waxaa lagu sharaxay macmiilka sare (6 g / 100 g), dufanka (20 g / 100 g) iyo carbohydrates (27 g / 100 g). 33% ee carnation waa fiber. Waxa kale oo ku jira ash iyo biyo.
Qodobbada waxtarka leh ee toonka loogu talagalay dadka
Saameyntii saamaynta faa'iido leh ee xabo ku jirta jirka bani-aadmigu waa mid aad u ballaaran. Waxay leedahay faleebo, antiseptic, antimicrobial, antispasmodic, bogsashada boogta, saamaynta antiviral, dhididka iyo saamaynta durida. Waxa kale oo loo yaqaan 'antifungal' iyo 'antifungal'.
Iskoolada ayaa loo isticmaalaa si looga hortago infalawansada iyo cudurrada kale ee fayraska. Kalluunku wuxuu ka cabsanayaa staphylococcus dahab iyo cadaan.
Kulanka fitamiin B, oo ah qayb ka mid ah burooyinkeeda dhirta dhirta, waxay yareeysaa buufiska, xiisadda, hagaajinta xasuusta, waxay kicisaa maskaxda.
Laga soo bilaabo tolku u sameeyaan decoctions daaweynta cudurrada indhaha, gaar ahaan si looga takhaluso shaciir. Ku darida cuntada waxay hagaajinaysaa rabitaanka cuntada, waxay caadiyan dheefshiidka cuntada, waxay hagaajisaa sunta, waxayna tirtirtaa samaynta gaaska.
Sidoo kale, warshadkan dhirta ah ayaa lagula talinayaa inay qaadaan xayawaanka, shubanka, xiidmaha mindhicirka, lallabbo. Waxay leedahay saameyn togan ee arthritis iyo arthrosis.
Waxtarka faa'iidada leh wuxuu saameyn ku yeeshaa caadada cadaadiska dhiigga.
Daawada dabiiciga ah, saliidda dhirta ayaa qayb ka ah bogsashada iyo boomaatada anti-bararka iyo baalasha. Diyaargarowga-karka waxaa loo isticmaalaa murgacashada iyo kala-soocidda cayaaraha.
Iskoolada ayaa loo adeegsadaa cilmi-baarista loogu talagalay mukhaadaraadka kansarka, taasoo xaqiijinaysa in ay xakameyn karto koritaanka unugyada kansarka.
Qalabka daawooyinka ee xumbada cuntada ayaa loo isticmaalay dhakhtarka ilkaha iyo ginecology.
Mid ka mid ah maqaalku waa adag tahay in la tixgeliyo waxyaabaha gaarka ah ee loo isticmaalo toonida dhinacyada kala duwan. Aynu joojinno oo keliya qaar ka mid ah, halkaasoo marar badan la isticmaalo.
Isticmaalidda toonaha ilkaha
Iskoolada waxaa loo isticmaalaa xallinta dhibaatooyinka ilkaha. Saameyntiisa ka hor-tagga waxaa lagu caddeeyey cudurada xannuunka, xiniinyaha, xuubka, iyo cudurrada afka ee afka (stomatitis, faryngitis, tonsillitis).
Si loo yareeyo ilkaha, waxaa lagula talinayaa inaad dalbato decoction ee xumbo cuntoloo yaqaan sifooyinka bogsashada. Si arrintan loo sameeyo, shan koofi ayaa karkaraya hal galaas oo saliideed ah (saliid, suntan, buckthorn badda). Maraq ayaa loo oggol yahay in la buufiyo oo la qaboojiyo. Ku codso tampons leh saddex dhibcood oo maraq ah iliga jiran.
Sidoo kale, si aad uga takhalusto xanuunka, waxaad ku xoqin kartaa budada dhirta cirridka, ku shub saliidda dhoobada on ilka ilmagaleenka, ama si fudud caleenta caleenta.
Waa muhiim! Haddii aad raacdo taladan, waa inaad ogaataa in isticmaalka daawooyinka dadku ay kaliya u horseedi doonaan suuxdinta muddada gaaban, laakiin ma aha in xal loo helo dhibaatada. Daaweynta iliga jirran, waa lagama maarmaan in lala xiriiro takhasusle.
Miisaanka iyo tinctures ee toon ah iyo gubasho ee xuubka xabka ee afka iyo cunaha ayaa loo isticmaalaa. Sidaas, kugula talinaysaa inaad xoqdo xiiro leh stomatitis.
Bariisku wuxuu leeyahay saameynta anti-bararka iyo kor u soo bogsashada degdeg ah ee boogaha. Cuncun iyo xanuunka qumanka, waxaa lagu talinayaa in la calaliyo dhiriga. Haddii ay dhacdo dhuun xanuun, ku dhaq biyo diirran, budada badda iyo budada digaaga ayaa si fiican loogu talinayaa.
Waxaa intaa dheer, inflorescences qalalan oo loo isticmaali karo halkii aad ku xanuujin lahayd xanjo waxyeello u leh habka dheef-shiidka - waxay si aad ah uga tirtirtaa urka aan fiicnayn ee afka oo taageera microflora macruufka caadiga ah ka dib cunista.
Ma taqaanaa? Spice ayaa lagu daray wax soo saarka xanjo ee Thailand iyo Hindiya.
Isticmaalista toon for madax xanuun
Si aad uga takhalustid madax xanuun waxaa jira dhowr cunto sida:
Diyaari jinka ah 5 g oo ah dhoobo dhulka, qorfe, yicib iyo biyo. Codso isku darka dhismayaasha.
Dalbashada ceymiska qashinka qadiimiga ah ee saliidda cawska iyo dhulka xumbo (5 g).
Isku daridan waxaa laga sameeyaa toon, milix iyo caano.
La soco wejiga iyo macbudyada leh isku dar ah saliidaha lagama maarmaanka ah ee dhirta (1 dhibic), chamomile (1 dhibic), lavender (3 dhibcood), yicib (1 tsp).
Daaweynta madax xanuun badan ayaa isticmaala tincture khamriga: 5 qaado shinbiraha dhulka lagu daraa 100 g oo ah vodka, kululaa oo cabi jiray nus saac.
Sida loo qaato toon
Waxaan mar hore ka hadalnay siyaabo dhowr ah sida loo qaato toon for ujeedooyinka daaweynta iyo prophylactic - si loo diyaariyo tinctures, decoctions, isku dhafka, dhibcood, saliid ku salaysan toon ah.
Waxa kale oo aad diyaarin kartaa dharbaaxo shaah. Subax kasta waxay isticmaalkeeda u kordhin kartaa jirka bini'aadamka iyada oo la helayo fiitamiinada maqan, niyadda kor u qaadka, kor u qaadista maareynta, xoojinta nidaamka difaaca jirka.
Waxay kaloo kaa caawin kartaa shubanka, kaadida iyo lallabbada. Teas waxaa laga diyaarin karaa hal cantiwo ama ku darida maaddooyinka kale: qorfe, sinjiga, liinta, iwm.
Waa muhiim! Ha ku darin shaaha in ka badan hal ama laba llorescences halkii koob, haddii kale cabitaanka wuxuu noqon karaa qadhaadh.
Marar badan hargabyada cuntada ka hor, waad qaadan kartaa isku dar ah oo jilicsan oo dhulka hoostiisa ah, basbaaska madow iyo shaaha oo malab ah, Guryaheeda daweyntu waxay ka caawinaysaa inay ka badbaado wakhtiga dayrta-xilliga qaboobaha oo aan lahayn ARVVI.
Sidoo kale, saameynta antiviral ayaa leh Clove Nidaamka saliida ee muhiimka ah. Waxay ka caawiyaan daaweynta hargabka, qufaca iyo cirridka sanka. Si taas loo sameeyo, ku dar dhawr dhibcood oo biyo kulul ah oo neefta ku neefso.
Saliidda Clove waxaa sidoo kale loo isticmaalaa aromatherapy si ay u dejiso nidaamka dareenka inta lagu jiro walaaca iyo niyadjabka. Sidoo kale saliid (2 dhibcood) ayaa lagu dari karaa qubayska markii la maydho.
Laakiin si loo xoojiyo wadnaha ayaa lagula talinayaa in la cabbo khamri cabiray. Intaa waxaa dheer, iyada oo ujeedada daaweynta mulled khamriga waa ka wanaagsan tahay in aan la kariyo, oo ku adkeyso dhowr todobaad. Si taas loo sameeyo, in 0.5 litir oo khamri cas cas ku dar 5 koob oo ah carnation. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu adkeeyo meel mugdi ah saddex toddobaad.
Ku dar hal shaaha si aad u shaandho ilaa saddex jeer maalintii. Sidoo kale, khamri cabir ah ayaa loo diyaarin karaa sida soo socota: 0.3 litir oo khamri ah oo casaan ah lagu riday liinta iyo liinta nus, 5 xabo, qorfe, karkariyo, qabow iyo daadi. Cab hal qaado qaado.
Si aad uga takhalustid qufaca, waxaad isticmaali kartaa ka hor wakhtiga jiifka isku dar ah shan dhibcood oo ah saliid carab ah lagama maarmaanka ah, hal canug oo toon ah iyo malab. Xanuunka dhagaha, saddex dhibcood oo saliid ah oo la kariyey ayaa la daadshay geerjeex kasta.
Carnation ee daaweynta arthritis iyo arthrosis ayaa si fiican u cadeeyay. Waxaa lagu daraa saliidda miisaanka (4-5 dhibcood / 10 ml), oo loo isticmaalo in lagu sameeyo isku-buufinta bogsashada.
Tampons qooyay decoction waxaa loo isticmaalaa in lagu bogsado nabarrada iyo xannuunada ba'an.
Clove waa mid ka mid ah qaybaha cuntada dheeraadka ah ee cunnada.
Clove iyo Ginecology
Dhirta dhirta ah waxay saameyn wanaagsan ku leedahay caafimaadka dumarka. Xataa qadiimka hore, waxaa loo isticmaalay in lagu kiciyo dhalida, iyada oo la socota dhiig kaddib, iyo sida macquul ah.
Saliid muhiim ah oo toon ah ayaa hagaajin kara codka ilma-galeenka, oo caadiyan caadada u ah caadada iyo hormoonnada. Sidoo kale, carnation waa aphrodisiac wanaagsan kaas oo wanaajiya soo jiidashada jinsiga oo sii dheeraynaya farxad galmo.
Sidee loo isticmaalaa dhir xireyaasha maqaarka
Cosmetology waxay isticmaashaa dharbaaxo lagama maarmaan ah. Waxyaabaha ugu muhiimsan, eugenol, waxaa lagu daraa kareemada, boomaatada, iyo xargaha. Waxaa lagu dabakhaa macaan.
Saliidda Clove waxay si firfircoon u dhaqdhaqaaqdaa maqaarka madow iyo finanku. Waxay leedahay saameyn liddi ku ah antiseptic, waxay yareyneysaa barar iyo dhuujin maqaarka. Si loo xalliyo dhibaatooyinka maqaarka, waxaa lagu talinayaa in lagu diyaariyo isku darka ku salaysan kiriimka.
Sidaas awgeed wejiga maqaarka leh ee saliid leh kareem lagu daro ama saliid saliid (10 ml), 2 dhibcood oo ah saliid carab ah oo muhiim ah iyo 2 dhibcood oo liin ah.
Wajiga, maaskaro ayaa loo isticmaalaa. laga bilaabo kareem ama saliid (10 ml), 1 dhibic oo saliid ah, 2 dhibcood oo saliid ah saliida iyo 1 dhibic oo saliid ah.
Si loo xakameeyo maqaarka isku dhafan hal ukun cad cad, hal dhibic oo saliid ah oo dhoobo, 1 dhibic oo saliid ah saliida, 1 dhibic oo saliid ah.
Iyada oo finan, waxaad ka hortagi kartaa wejiga 15-daqiiqo oo ka kooban halbeegga: saliidda qumbaha (10 ml), saliidda xayawaanka (2 dhibcood), saliidda laysarka (3 dhibcood).
Sidoo kale, saliidka lagama maarmaanka ah ee xayrta ayaa ka caawiya xoojinta timaha iyo nafaqada timaha timaha. Wixii daciif ah, u nugul timaha luminta, maskadaha leh iskudarka saliidda dhoobada ayaa lagu talinayaa.
Mid ka mid ah fursadaha ugu fudud ee koritaanka timaha kor u qaadista maaskarada waa ee 30 ml saliid kasta oo qudaar ah ku dar 5 dhibcood oo saliid ah. Xoq xididdada timaha iyo maqaarka. Ka tag 40 daqiiqo.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in saliidda cawsku ay leedahay saameyn aad u xoog badan, oo aan hoos u dhicin, waxay sababi kartaa gubasho iyo maqaarka maqaarka, sidaa daraadeed waxaa jira khilaaf u gaar ah, gaar ahaan, waxaa reebban carruurta iyo dhallinyarada da'doodu ka yar tahay 15 sano.
Clove iyo Karinta
Si aad u hesho dhadhan gaar ah iyo caraf udgoon ee carnation karinta waa loo isticmaalaa:
marka la kariyo hilibka duban iyo hilibka lo'da, hilibka duqadda ah;
roodhida iyo quraacda wax lagu dubo;
marka la karinayo maraqyada iyo koorsooyinka koowaad;
kalluunka iyo sausage wax soo saarka;
ee lagu kariyo karinta, khamriga wax lagu dhufto, feeraha;
sida wax lagu daro marinnada (hilibka, kalluunka, khudaarta, boqoshaada, berry);
in ay ka kooban tahay suugada, majones.
Dhaqdhaqaaqa kulaylka ah ee xayrta ayaa u gudbaya suxuunta kulul iyo qabow. Iyadoo kuleylka dheer, dhadhanka bahalka ayaa kordhaya, laakiin carafka heerkulka sare ayaa uumi baxa. Sidaa darteed, suxuunta meesha urka dhogorka yimaado marka hore, maraq waa in lagu daraa sida ugu macquulsan.
Waxaa muhiim ah in aan la dhaafin marka lagu daro bahalka, sababtoo ah xaddi badan oo ka mid ah saxan ayaa xiran kara dhadhanka alaabta muhiimka ah iyo bixinta dhadhan gaar ah oo adag.
Waxaa lagu talinayaa in lagu daro maraq 1-2 xabo oo ah 1 litir oo ah dareeraha. Markaad cunto karisid - ilaa laba buro. In cajiinka jiifay 4-5 dhirta 1 kg. In marinade tuuro 3-4 g xabuub 10 litir.
Dhukunka dhulka, oo ay weheliso dhir udgoonnada kale, waxay ka mid yihiin maadada masala ee caanka ah.
Ma taqaanaa? Si loo go'aamiyo tayada carnation, waa in lagu tuuraa weel biyo ah. Meel fiican oo faa'iido leh waa inaad tagtaa xagga hoose ama dusheeda toosan oo kor u qaad. Haddii laysku daro maaha, laakiin dusha sare ayay u socotaa, waxay ka dhigan tahay in saliidda muhiimka ah ay ka baxday iyada oo aan jirin wax faa'iido leh.
Sidoo kale, tayada carnation waxaa lagu ogaadaa adigoo u dhexeynaya laba qaybood oo warqad ah isla markaana laba jeer ku dhejinaya pin leh. Haddii waqti isku mid ah warqadda ku sii jiri doono lafaha saliidda ah, ka dibna dhirta ayaa wanaagsan.
Contraindications in isticmaalka toon ah
In kasta oo xaqiiqda ah in dhariga la dhajiyay tiro ka mid ah guryaha daawooyinka, waxaa sidoo kale jira contraindications in ay isticmaalaan. Waa in aan la cunin carruurta da'doodu ka yar tahay laba sano, haweenka uurka leh, hooyooyinka kalkaalinta xanaaneeya.
Waa wax aan loo baahnayn in la qaato daawadan iyada oo leh xanuunka gaduudka oo leh aalado sarreeya iyo cudurrada boogaha. Waa in la yareeyo dadka qaba xanuunka dhimirka.
Sababtoo ah labadan miro ayaa labadooduba isku mid noqon karaan oo yareyn kara, waxay ku riixi kartaa muruqyada mareenka caloosha iyo xakamaynta dhiigga, xinjirrada looma isticmaali karo hypertension, waxaa jira khilaaf u dhexeeya dadka ku nool xaalad farxad qotodheer.
Xasuuso in haddii dhammaan siyaabaha kor ku xusan aysan kuu caawineynin, markaa daaweyn dheeraad ah waxaad u baahan doontaa talada khabiir takhasus leh.